Nabad Sugidda gobolka Banaadir oo galabta xabsiga dhigtay siyaasi (Waa kuma?) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
7th October 2014 A warsame Af Soomaali 0
Mareeg.com: Ciidamada Hay’adda Nabad Sugidda Soomaaliya ayaa galabta xabsiga u taxaabay siyaasiga Cali Maxamed Nuux (Timajilac), oo ka tirsan siyaasiyiinta ku dhaqan Magaalada Muqdisho, gaar ahaan Xisbiga Jamhuuriga ah.
Ciidamada Hay’adda Nabad Suggida ee Gobolka Banaadir, ayaa waxay Siyaasiga ka wateen hoygiisa oo ku yaala Degmada Xamar Weyne, waxayna u sheegeen in uu xarig yahay, isla-markaana uu soo raaco.
Waxaa soo baxaaya warar sheegaaya in Siyaasigu uu ka hadlay xariga Suxufiyiinta u xiran Dowladda Somaliya, iyadoona uu ku sheegay inay xaqdaro ku xiran yihiin, waana tan loo badinayo iney sabab u tahay xarigiisa.
Todobaadkii hore ayay dowladda Soomaaliya mar xirtay siyaasiga C/llaahi Sheekk Xasan Cali oo ah gudoomiyaha xisbiga Nabadda Iyo Dimuquraadiyadda, kaasoo marar badan dhaleeceeyey siyaasadda dowladda Madaxweyne Xasan Sheekh.
Hay’adda nabad Sugidda ayaa waxaa haataan u xiray 4 ka mid ah mas’uuliyiinta Radio Shabeelle iyo SKY FM, kuwaasoo ururada saxaafaddu codsadeen in maxkamada lasoo taago ama la sii daayo.